"သူငယ်​ချင်း​Ar-t​မွေး​နေ့​လေးကို ထူးခြားစွာ ဆုမွန်​​ကောင်း​တောင်း​ပေးလိုက်​တဲ့ စန္ဒီမြင့်​လွင်​" - Cele Connections
“သူငယ်​ချင်း​Ar-t​မွေး​နေ့​လေးကို ထူးခြားစွာ ဆုမွန်​​ကောင်း​တောင်း​ပေးလိုက်​တဲ့ စန္ဒီမြင့်​လွင်​”
CeleConnectionsပရိသတ်​​တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်​မယ်​ထင်​တဲ့ နာမည်​​ကျော်​အဆို​တော်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ စန္ဒီမြင့်​လွင်​နဲ့ အထူးတလည်​မိတ်​ဆက်​​ပေးဖို့မလို​လောက်​ဘူးထင်​ပါတယ်​။ စန္ဒီမြင့်​လွင့်​ရဲ့ သီချင်းတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​တဲ့ ” ​ခေါက်​ထားလိုက်​”သီချင်းက​တော့ ပရိသတ်​​တွေကြားမှာ အခုချိန်​ထိကို ​ရေပန်းစား​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြား​နေတဲ့သီချင်းတစ်​ပုဒ်​ဆိုလည်း မမှား​လောက်​ပါဘူး​နော်​။ စန္ဒီမြင့်​လွင့်​က​တော့ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ သမီး​​လေးနဲ့ ကြင်​နာတတ်​တဲ့ ခင်​ပွန်းတို့နဲ့သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝ​လေးကို ပိုင်ဆိုင်​ထားတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
စန္ဒီမြင့်​လွင်​က​တော့ အိမ်​မှာ​နေရင်း အား​ပေးတဲ့ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ သမီး​လေးရဲ့အမှတ်​တရပုံရိပ်​​လေး​တွေနဲ့. Tik tokဗီဒီယို​လေး​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာတင်​​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်​။ ဒီ​နေ့မှာဆိုရင်​​တော့ အဆို​တော်​ဘဝတည်းက ​မောင်​နှမအ​နေနဲ့ခင်​မင်​ရတဲ့ Ar-Tရဲ့ ​မွေး​နေ့​ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ စန္ဒီမြင့်​လွင့်​က “Happy birthday ကွီးအားတီချစ်သူနဲ့အမြဲပျော်နိုင်ပါစေ
ပွဲတွေအများကြီးဆိုပီးပိုက်ဆံတွေအများကြီးရပါစေ”လို့ဆိုကာ ​မွေး​နေ့ဆုမွန်​​ကောင်း​လေး​တောင်း​ပေးလိုက်​တာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အခင်​ရဆုံးသူငယ်​ချင်းလည်းဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ birthday wish​လေးဆု​တောင်းပေးလိုက်​တာပါပဲ​နော်​။
CeleConnectionsပရိသတ်​​တွေအတွက်​လည်း စန္ဒီမြင့်​လွင်​ရဲ့ ​မွေး​နေ့ဆုမွန်​​တောင်း​လေးကိုပြန်​လည်​ပြီးမျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ ပရိသတ်​ကြီးကလည်း Ar-t​အတွက်​ ​မွေး​နေ့ဆုမွန်​​ကောင်း​လေး​တွေ​ရေး​ပေးခဲ့ကြပါ​နော်​။
Soure….Sandy Myint Lwin’s Facebook
“သူငယျခငျြးAr-tမှေးနလေ့ေးကို ထူးခွားစှာ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ”
CeleConnectionsပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျတဲ့ နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈဦးဖွဈတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျနဲ့ အထူးတလညျမိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ စန်ဒီမွငျ့လှငျ့ရဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ ” ခေါကျထားလိုကျ”သီခငျြးကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ အခုခြိနျထိကို ရပေနျးစားအောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့သီခငျြးတဈပုဒျဆိုလညျး မမှားလောကျပါဘူးနျော။ စန်ဒီမွငျ့လှငျ့ကတော့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနဲ့ ကွငျနာတတျတဲ့ ခငျပှနျးတို့နဲ့သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့ အိမျမှာနရေငျး အားပေးတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ သမီးလေးရဲ့အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့. Tik tokဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာတငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာဆိုရငျတော့ အဆိုတျောဘဝတညျးက မောငျနှမအနနေဲ့ခငျမငျရတဲ့ Ar-Tရဲ့ မှေးနဖွေ့ဈတာကွောငျ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ့က “Happy birthday ကှီးအားတီခဈြသူနဲ့အမွဲပြျောနိုငျပါစေ
ပှဲတှအေမြားကွီးဆိုပီးပိုကျဆံတှအေမြားကွီးရပါစေ”လို့ဆိုကာ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးလေးတောငျးပေးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ အခငျရဆုံးသူငယျခငျြးလညျးဖွဈတာကွောငျ့ birthday wishလေးဆုတောငျးပေးလိုကျတာပါပဲနျော။
CeleConnectionsပရိသတျတှအေတှကျလညျး စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့ မှေးနဆေု့မှနျတောငျးလေးကိုပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး Ar-tအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးလေးတှရေေးပေးခဲ့ကွပါနျော။